Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ အာကာမိုးနိုင်Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ: September 2011
Office Button Image by Free-Buttons.org v2.0
အင်္ဂလိပ် FLASH သီချင်းများ
Hãy về đây với anh
I miss you finally
Just to say I love U -avery nice song
The day you went aways 2
You took my heart aways
My star to come
Đường Tăng ở Nữ Quốc
Trái tim quên lãng
* Funny songs
Bài hát vui nhộn trong quảng cáo Heineken
Ketchup - Bài hát do chú bò ngộ nghĩnh trình diễn
Phi đội gà bay Soundtrack
♦♦ မြန်မာ FLASH သီချင်းများ ♦♦
Flash Song အသစ်များ
မွန်လေး FLASH သီချင်းများ
အင်တာနက်ချစ်သူ ပြန်လာမဲ့အချိန် "မ" အတွက်သီချင်း ပြန်လာပါ ကော်ရုပ်လေး လွမ်းဆွတ်ခွင့် ချစ်သူ-ရိန်မိုး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသဲကွဲသောနေ့ ပထမအနမ်း ချစ်သူသိပါစေ နင်မသွားခင် နှမြောတယ် အလွမ်းဝင်္ကပါ မ မရှိတဲ့နေ့ရက်များ ကဗျာမမှီတဲ့အချစ် မိုးသည်းချိန်မှာ နောက်ဆုံးပေါ့ မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် သံစဉ်နဲ့ချော့သိပ်ခွင့် သူလေး သိမ်းထားခွင့် အမုန်းတော် ရိုးမြေကျ မင်းရှိရင် ဆု....ထံသို့ နှုတ်ဆက်သီချင်း ကောင်းကင်ကအချစ်ငှက် ပြုံးလိုက်ပါ ကမ္ဘာပျက်နေ့ ဖက်ထားမယ် တစ်ချိန်က”မ” မမ ကောင်လေး-ရိူးရာ တမ်းတခြင်း-Oakkar ဆုံစည်းခွင့်-ရိုးရာ+ Mc ဟိန်းထက် လမင်းသစ်ပင်-ရိန်းမိုး တစ်ကယ့်ပုံပြင်-ရိုးရာ မိုး-ရိုးရာ+Rဖြိုး+ဥာဏ်ထက် အမြဲရှိနေပါ ကောင်မလေး..သို့ အချစ်ရူးလေး
ဘ၀မီးအိမ် FLASH သီချင်းများ
အမုန်းဖွဲတေး ပြိုလဲကြေကွဲ တစိမ့်စိမ့်ကြည့် မီနစ်တိုင်း ကိုယ်မညာတော့ဘူး နေပါစေ ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ ဒီတိုင်းလေးပဲချစ်နေမယ် တိတ်တိတ်လေး တစ်မိုးအောက် မျက်နှာ ကောင်းကင်မေမေ ဖွဲမီး ငရုတ်သီး နိဒါန်း လွမ်းသူအကြောင်း ရင်နာတယ်ဧပရယ် ခေးရယ် ရင်မှာအရင်အတိုင်း နှလုံးသားတစ်စုံရဲ့ဆန္ဒ ခိုနားရာ အတိတ်ရဲ့နွေ လက်ခံပေးပါ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ အနိုင်မယူသူအရှုံး နောက်ဆုံးအချစ် တူညီတဲ့အချစ် အနားနားရှိရင်ပြည့်စုံပြီး ပြန်လာပါမ အင်းယားလမ်းကပန်းဆိုင် ဆေးကျောင်းသား မမ မိုးသည်းချိန် အလွမ်းပြေအနမ်း မိန်းကလေးပါ ဒီတစ်ခါမခွဲတော့ဘူး ငါ့ရင်ခွင်ကို မင်းတစ်ယောက်သာ ရီးစားထားတဲ့အရွယ် အမေ ကိစ္စမရှိဘူ မင်းချစ်မှချစ်ပါမလား ချစ်တယ် ကိုယ်မညာတော့ဘူး ငါ့တော့မှားပြီး ပုံရိပ်လေး မြတ်နိုးသူအတွက် ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ ချစ်သူ နင်တစ်ယောက်တည်း အချစ်နဲပိုက်ဆံ ညီမလေး ပြန်မဆုံဖြစ်ကြရင် ကိုကိုရေ တောင်းပန်ပါတယ်
အိပ်မက်သံစဉ် FLASH သီချင်းများ
မင်းသိပါစေ ရှိသည်ဖြစ်သည် လွမ်းဆဲပါ ကြယ်ကြွေသွားသည့်တိုင် ကျောင်းသီချင်း ကြည်နူးခွင့် ကြိုနေစေချင်တယ် လမင်းသို့ လမ်းခွဲ လမ်းမခွဲခဲ့ အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူ အချစ်ကြီးသူ အလွမ်းနေ့ရည်ရှည်များ အလွမ်းပြေအနမ်း အလွမ်းဆုလဒ် အလွမ်းရောင် အလွမ်း အမောပြေ အမေ အမြဲတမ်းအတွက်မင်း အနိုင်မယူသူရဲ့အရှုံး အပြုံးလေး အတိုင်းထက်အလွန် အဝေးကပဲချစ်နေမယ် အချစ်=အချစ် အချစ်ဆိုသည်မှာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း အချစ်သီချင်း အချစ်ရဲ့သီချင်းသံ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် ဘဝဆိုတာ Bad Girl ချစ်ကံဆိုး ချစ်ခဲ့တာလားရူးခဲ့တာလား ချစ်သမီးလေး ချစ်တယ်ဟုတ် ချစ်သူရဲ့ပုံပြင် ဒီအတိုင်းလေးပဲချစ်နေမယ် ဒီဇင်ဘာညတစ်ည ဒီဇင်ဘာည အိမ်ကိုလွမ်းတယ် အိမ်မက်ချစ်သူ အိမ်မက်ထဲကချစ်သူ သူငယ်ချင်းချစ်သူ နှင်းဆီ နှစ်ပတ်လည် ထာဝရအရှုံး ထာဝရ I Miss U ဂျူလိယက် ကမ္ဘာငယ်လေး ကာရန်လေး ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို ကောင်မလေး ကြွေပါစေ ကိုချစ်ရသူ ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် ကိုကိုက ကွဲပျက်ခြင်း ကိုမညာတော့ဘူး
Lashiothar FLASH သီချင်းများ
အချစ်အိပ်မက်လေး ညီမလေးအတွက် Baby Gril တော်ပြီနောက့် အိပ်မက်ထဲကလူ အဖြူရောင်သူငယ်ချင်း ငါ့နဲ့ မင်း ဖက်ထားမယ် အဖြည့်ခံ မိုးဘယ်မှာရွာနေလဲ ချစ်တယ်ဟုတ် Bad Gril ပြော သနပ်ခါး အချစ်ဝင်္ကပါ L.O.V.E(Kg Ma Lay) အရင်ကဇတ်လမ်း လွမ်းနေပြီ အလွမ်းဝင်္ကပါ အလွမ်း ရှင်းပြခွင့်ပေးပါ Over You မိုး အနားနားဘေးမှာ မင်းကိုသတိရရင် ချစ်ခဲ့တာလား ရူးခဲ့တာလား အလွမ်းဆုလဒ် ကြိုစေချင်တယ် ငါ့နေရဲာJustin Bieber @ Baby Justin Bieber @ Never Say Never Radio ပေးခဲ့တဲအလွမ်း ပက်သက်ခွင့်ပြုပါ(bunny) ကမ္ဘာငယ်လေး မသိချင်ယောက်ဆောင်မျက်နှာလွဲ ခိုနားရာ ကောင်ကလေးက ကောင်မလေးကို ထာဝရပက်သက်ခွင့်ပြုပါ ကွာခြားမူ နတ်သမီးလေး(Angel) မမ ငါ့ရင်ခွင်ကို ဘယ်သူ့အတွက်လဲ (For Whom) မေ့လို့မရသေးဘူး နင်မေ့လို့ရပြီလား လူကြမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အဆွေး For February 14 (February မှတ်တမ်း) အမည်မသိသေးတဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ နေ၀င်ချိန် လရောင်အဝေး ဒီကောင်မလေးအတွက် ရိုမီယို&ဂျူးလိယက် ကောင်မလေး တစ်ခါပဲချစ်ချင်လို့ သီချင်းလေးထဲကမင်းကို အဆင်ပြေပါစေကွယ် တစ်မိုးအောက် သစ္စာတရား လွမ်းတော့ပြန်လာပါ မြဲစေတာ တကယ်ဆိုရင် အသဲကွဲဒဏ္ဍရီ အချစ်အိပ်မက်လေး Baby Girl မီးအိမ်ရှင် တော်ပြီနောက် ညီမလေးအတွက် ဥ အဖြူရောင်သူငယ်ချင်း ဖက်ထားမယ် အဖြည့်ခံ လမ်းကြုံရင်ပြောပေးကြပါ နင်မေ့လို့ရပြီလား ဖန်သားနန်းတော် ချစ်သူသိပါစေ အသဲကွဲဒီဇင်ဘာ မျှော်လင့်ခြင်းမနက်ဖြန် မိုးဘယ်မှာရွာနေလဲ မျောက်ဖြစ်ချင်တယ် ဇာတ်သိမ်းခန်း ဖြူ ချစ်တယ်ဟုတ် Bad Gril ငါ့ရင်ခွင်ကို ပြော အသိုင်းအ၀ိုင်း သနပ်ခါး တစ်ယောက်ထဲသာ အချစ်ဝင်္ကပါ L.O.V.E(Kg Ma Lay) မင်းတစ်ယောက်ထဲ အရင်ကဇတ်လမ်း လွမ်းနေပြီ အလွမ်းဝင်္ကံပါ အလွမ်း ရှင်းပြခွင့်ပေးပါ OverYou လွမ်းတယ် မိုး နားနားဘေးမှာ မင်းကိုသတိရရင် ချစ်ခဲ့တာလား...ရူးခဲ့တာလား လက်ခံပေးပါ ဘာကြောင်းကြောင့် အလွမ်းဆုလဒ် မျှော်လင့်ချက် လမ်းမကြီးရဲ့ဘေး ရန်ခုန်စရာရှု့ခင်း ၀အောင်ငိုလိုက်မယ် ကြိုစေချင်တယ် ငါ့နေရာ အဆုံးသတ်ချိန် ဆူးကင်းသောလက် Justin Bieber* Baby Justin Bieber * Never Say Never စဉ်းစားပါ နှင်းမဲ့ဆောင်း အချစ်တဲ့လား Radio ပေးခဲ့တဲ့အလွမ်း ပက်သက်ခွင့်ပြုပါ ရှိနေမယ်(ဟန်ထွန်း) ကမ္ဘာငယ်လေး မသိချင်ယောင်ဆောင်မျက်နှာလွဲ ခိုနားရာ ဆာရိုးနားယား အဖြူရောင်သူငယ်ချင်း(NEW) ဒီဇင်ဘာည ကောင်မလေး(New) ဘွဲ့ ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို သူငယ်ချင်းပြောတဲ့(အေမီ) စလုံးကချစ်သူ ချစ်သူ မ
ချစ်သူ့မြို့တော် မှ FLASH သီချင်းများ
၀င်မလာပါနဲ့ချယ်ရီသက်သေ snow queen Ma Ma ဖ်ိတ်စာ နွေအလွမ်း Ha Ha La Gyi Ah အပျိုကြီး ညီမလေး ပန်းချစ်သူ.....ဒို့လည်းလိုက်မယ် ယုံကြည်ပေးပါ Belly Dancer MyHappyEnding ယုံကြည်ပေးပါ(Remix) ရင်ထဲခိုနားလှည့်ပေါ့ကွယ် အဖြူေ၇ာင်လေးပါကွယ် မုန်းခိုင်းတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘူး ပေါက်တဲ့အိုး တိတ်တခိုးအချစ် စံပါယ် တခုလောက်ဖြေပေးပါငယ်ကျွမ်းဆွေ ကင်ဆာ ၀ိုင်းဆုရဲ့(လမ်းမကြီးရဲ့ဘေး) အရမ်းလွမ်းတယ်မရယ် မ..မ(၂) တပင်တည်းရင်ထဲကနွယ် တစ်စက္ကန့် နွေရာသီလမ်းခွဲ သခင့်ထံအပြေးပြန်လာမည် နူတ်ဆက်စကား မောင့်အရိုင်းပန်း ငယ်ဖော် အသည်းကွဲမြို့တော် VENUS Baby(Mc Wai Lin) ကြယ်ကြွေကောင်းကင် လမ်းဆုံ နှစ်သ်ိမ့်တဲ့တေး သူစိမ်းတယောက်ပါ နှင်းဝေတဲ့ဆောင်း အလှစစ် ညို့မျက်ဝန်း နှလုံးသာရှာသူ အလွမ်းရဲ့ည ထူးအိမ်သင်ရဲ့ (ကြယ်တွေဆုံတဲ့ည) Nကိုင်ရာရဲ့ (မဝေးတဲ့ချစ်ခြင်း) ကြယ်ကြွေကောင်းကင် ပုံစံမတူတဲ့အချစ် လမင်းသစ်ပင် လမ်းဆုံ လမ်းဆုံ(၂) လျှို့ဝှက်ထားတယ် သိမ်းထားမှာလား ဂီတာအဉ္ဖလီ ကြယ် နောက်ကျရင် မိုး(မျိုးကြီး)
တို့နှစ်ယောက်အကြောင်း ရုပ်သေးရုပ် ဒီမိုးသည်းချိန်တိုင်းမှာ ပြန်ဆုံနိုင်ဦးမလား မင်းနဲ့အတူရှိချင် ကြွေနေပြီ တိုကျိုအိပ်မက် မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး အာဒံဧ၀ တောင်းပန်ပါတယ် I Love U Baby BabY Cry On My Sailing HONEY ကိုယ့်ရဲ့သက်တန့်ငယ် အလွမ်းဝင်္ကပါ မ မရှိတဲ့နေ့ရက်များ ခါး(အငဲ) သိမ်းထားခွင့်
ချမ်းချမ်း(ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း) မျိုးကြီး(နူးညံ့စွာပြောင်းလဲခြင်း) လက်ခံပေးပါ(၂)မျိုးကြီး မျိုးကြီး=အတိတ်ရဲ့နွေ Baby စပါယ် အမြဲတန်းယုံကြည်တယ် သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ် မိန်းကလေးပါ ဒီဇင်ဘာည၂ ပြည့်စုံလွန်း အသိအမှတ်ပြုပါ ကြယ်ကြွေကောင်းကင် Congratulation ညီမလေး မကြင်နာလေသူသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသဲကွဲသောနေ့ ပထမအနမ်း ချစ်သူသိပါစေ နင်မသွားခင် နှမြောတယ် မျှော်လင့်မိတဲ့ငါ့နတ်သမီး လမ်းခွဲ နောက်ဆုံးပေါ့ Baby-(Mc Wai Lin) ရင်ထဲကလာတဲ့သီချင်း ကော်ရုပ်လေး လွမ်းဆွတ်ခွင့် ချစ်သူ-ရိန်မိုး ငါ့ရဲ့လမင်း(လေးဖြူ) ရင်ခုန်စရာရှုခင်း(မျိုးကြီး) ကိုယ့်ရဲ့ကွက်လပ် ဆု....ထံသို့ ခလေးလေး မ-အတွက်သီချင်း ယုံမှာလား ရောခ့်သီချင်းတစ်ပုဒ်(မျိုးကြီး) မိုးသည်းချိန်မှာ Venus လမ်းဆုံး ပြန်လာပါ အလည်လွန်နှလုံးသား ဒို့ဝေးရာ ကျေးလက်တောတန်း အင်တာနက်ချစ်သူ ပြန်လာမဲ့အချိန် ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် SaveTheAged ဆာဒါငဲယိုး၂ ပျော်တော်ဆက် ကောင်မလေး မင်းအချစ်ကြောင့် မလွမ်းဘဲမနေနိုင် မလှည့်စားနဲ့ အလွမ်းနေ့ရက်ရှည်များ ဒီအတိုင်းလေးဘဲချစ်နေမယ် အတောင်ပံပါရင်မင်းဆီကို TakeMeToYourHeart ထားအတွက် ကင်တင်းထဲကကွင်းလက်ချာ(အရိုး) ILoveYou ရာစုသစ်အလွမ်းသမား Rain Story (ပြည့်စုံ) မင်းနဲ့မှချစ်တတ်ပြီ အချစ်ဒါဏ်ရာ လွမ်းတယ်(မ)ရယ် မင်းနားလည်မှာ ချစ်သူရဲ့ပုံပြင်(အနွန်) (မ)အတွက်သီချင်း ကျောင်းပိတ်ရက်လေး ကျေးဇူးပဲမနက်ဖြန် ကောင်မလေး onelesslonelygirl ငါ့နေရာ "မ" အတွက်သီချင်း ကဗျာမမှီတဲ့အချစ်
MM Flash Songs မှ FLASH သီချင်းများ
မင်းအကြောင်းအိမ်မက် မိန်းမယူရင်စဉ်းစားကျ ချစ်သူရင်ခွင် ၀တ်မှုံ သီချင်းတပုဒ်မင်းဆိုလိုက် We are the world သူ့ကိုကျနော်ချစ်သည် မင်းမုန်းမှာစိုးတယ် မင်းလေးကိုသိပ်ချစ်လို့ မင်းသိလာမယ် ယုံကြည်ပေးပါ မျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန် ကလေး လေး ချစ်ရက်နဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ဆန္ဒတစုံ အလွမ်း ဖူးစာရှင် သဲသဲလှုပ် ဝေခွဲမရပါလား လိုက်ဖက်တဲ့ဘ၀ ငါ့ရင်ခွင်ကို အဆင်ပြေပါစေ Gtalk သူ ၀န်ခံလိုက်ပါ ရီးစားစာ တခါထဲချစ်ချင်လို့ပါ (၂) မိုး တိုးတိုးလေး ကြည်နူးခွင့် မုန်းမေ့ဖို့မလွယ် မလွယ်ပါကွယ် ကျောင်းသီချင်း ကြိုနေစေချင်တယ် ချစ်ကံဆိုး အပြုံးလေး နတ်သမီး လမင်းသို့ သီချင်းမဲ့ဂီတာ အမောပြေ ဆုတောင်းမယ် ဆုတောင်းမယ်(၂) ဟိုအရင်လို မိုးသည်းထဲမှာ အမေ နင်ပြန်လာခဲ့ ပေးဆပ်ခွင့် အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူ ချစ်တယ်ဟုတ် ဖန်သားနန်းတော် ဒို့လည်းလိုက်မယ် မြတ်နိုးသူအတွက် ပုံရိပ်လေး ပြန်တော့ကွယ် အချစ်ကိုသိချိန် မင်းတယောက်သာ မမချစ်လို့မဖြစ် အမြတ်နိုးဆုံး ချစ်ခွင့်ရခြင်ပြီ ခွဲခွာရက်သူ ဘာကြောင့်လဲ အတ္တ စာမျက်နာ ၁၅ မျက်နာများတဲ့မောင် ဒီလမ်းမကြီးရဲ့ ဘေး အင်းယားသို့ နှစ်ပတ်လည်(၂) မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် ပြန်လာပါကွယ် သူသိပါကွယ် All out of love စလုံးကချစ်သူ ပတ်သက်ခွင့်ပြုပါ တကယ့်ပုံပြင် ကောင်မလေး တယောက်သောသူအတွက် မင်း မရေရာဘူး မအေးကိုချစ်လို့ ဆက်ချစ်ခွင့်ပေးပါ ညှို့နှိင်လွန်းတဲ့သူ ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် ကြိုပြီးတောင်းပန်တယ် ရဲလေး သီချင်း ရီးစားထားတဲ့အရွယ် အချစ် = အချစ် သီးသန့်ဖြစ်တည်မူ ကိုကို့စိတ်ကူး မမက တကယ်ဆိုအချစ်ဘဲလိုတယ် ကြယ်ကြွေကောင်းကင် အချစ်များသူ့ဆီမှာ ပြန်တွေးကြည့် ယုံကြည်တော့အချစ် ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို နေရာ တယောက်သော သူ အဆုံးမဲ့ အလွမ်းပြေအနမ်း အလွမ်းဆုလဒ် ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ် မင်းသိလာမယ်2ပြန်မဆုံဖြစ်ကျရင် နောက်ဆုံး အမှန်သိခွင့် (ဒိုးလုံး) ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှ တခါခါ စိတ်လျှော့လိုက် ရိုးရှင်းသောဘ၀ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မူ ဓမ္မဒါန လမ်းကြုံရင်ပြောပေးကြပါ StayWithMe ချစ်ခဲ့တာလားရူးခဲ့တာလား BadGirl သန်ခေါင်ယံည နုတ်ဆက်စာ အလွမ်းပြေအနမ်း ၂ ပြန်မဆုံဖြစ်ကျရင်၂ အချစ် နှောင့်ယှက်သူ ပြန်မရဘူး ငါ့ရင်ခွင်ကို ၂ မေ့တော့မေ့သေးဘူး မြတ်ဆုမွန် မကြာခင်မှာကြင်နာမယ် နေချင်တယ်မင်းအနား ဝေးလို့နေမလားမေ့လို့နေမလား ရွှေတိဂုံ(၂) သံယောဇဉ် သံစဉ်တွေနဲ့ချော့သိပ်မယ် ကောင်မလေး နောက်ဆုံးအချစ် မချစ်နဲ့တော့ မျှော်လင့်ခြင်းကွင်းပြင် MyHeartWillGoOn လွမ်းရဲမှ ၀ိရောဓိ အလွမ်းဝင်္ကပါ မင်းတယောက်သာ BeWithYou ကိုယ်မညာချင်တော့ဘူး ဆွေးမြေ့အသဲ သံယောဇဉ် ချစ်သူထားခဲ့တော့ ချစ်ဦးမေ အချိန်တိုင်းပဲ နားလည်ပါ ကြယ် လွန်ပါစေအလွမ်းညတွေ လူလည်အာရှသား ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ကြေကွဲရလိမ့်မယ် စိတ်ကူးလွင်ပြင် KissMe မ..ကို
မီးအိမ်ရှင် အလွမ်းပြေအနမ်း လွမ်းနေပြီ လွမ်းနေပါတယ် အလွမ်းနိဂုံး မင်းချစ်မှချစ်ပါ့မလား အပြုံးလေး စိုးရိမ်ရတာပေါ့ မျှော်လင့်ခြင်းအဆုံး အပြစ်တခုဖန်ဆင်း ဘ၀ရဲ့လမ်းများ ခွဲခွါခြင်းနေ့ရက်များ ငါတော့မှားပြီ ကိစ္စမရှိဘူး မင်းနဲ့မဆုံသ၍ တို့နှစ်ယောက် ပျော်ပါစေ ဖက်ထားမယ် မ-မရှိတဲ့နေ့ရက်များ တွဲလက်များ ဒီကောင်မလေးအတွက် ရှင်သန်ခြင်းပြဇတ် ရွှေရောင်အရှုံး (အိမ်) နင်သိရဲ့လား နေညိုရင်၂ ငါ့ရဲ့အနား ခိုင်မြဲသောအချစ် ငါ့ရဲ့လမင်း ချစ်လို့ရရန် အလွမ်းပြေအနမ်း၂ မင်းလိုက်ရဲပါစေ သူငယ်ချင်းချစ်သူ အင်းယားလမ်းကပန်းဆိုင် သတိရရ-မရရ အဖြည့်ခံချစ်သူ တိတ်တခိုး နင်မလိုချင်လဲ လမ်းပျောက်ချိန် အလွမ်းကဗျာ အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ မညာပါနဲ့ ချစ်သူလေး ညလေပြေ အိနြေ္ဒရှင်မလေး မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် လေပြေ၂ တဖက်သတ်အလွမ်း ဝေးပြီးတဲ့နောက် မနဲ့မောင် ချစ်တယ် ပြုံးလိုက်ပါ နှလုံးသားချင်းထိတွေ့ခဲ့တယ် ဖူးစာရှင် ဗုဒ္ဓမေတ္တာပန်း အိမ်မက်ရဲ့သမီးပျို မင်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ အလွမ်းသင့်ပန်းချီ ပျော်သလိုနေလိုက်တော့ စိတ်ကူးလွင်ပြင် အလွမ်းနိဂုံး မျှော်လင့်ခြင်းအဆုံး ဘ၀ရဲ့လမ်းများ နင်သိရဲ့လား အလွမ်းပြေအနမ်း၃ လရောင်ဆမ်းသောလမ်း တစ်ဖက်သက်အလွမ်း ဝေးပြီးတဲ့နောက် တစ်နေ့တော့ လမင်းသစ်ပင် ချစ်သူ နားနားဘေးမှာ ပျံသန်းသွားတော့ ဟုတ်လို့လား Never Be Replaced ချစ်မိနေပြီ နိုးတစ်ဝက်အချစ် အချစ်အတွက်ကိုယ်စား ငါ့ရဲ့အနား ၂ ဝေးသွားတဲ့အခါ မီးအိမ်ရှင် ငါ့နေရာ Anywhere for you Justin Bieber(Baby) သီရိသူ ဒီဇင်ဘာည ဒီဇင်ဘာည၂ ငါမှားလားမင်းမှန်လား ဆေးကျောင်းသား တကယ်ဆိုရင် အမေ စွန့်လွှတ်ခက်သူ နင်စေရင် အနှိုင်းမဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အနိုင်မယူသူရဲ့အရှုံး ခိုးချစ်ရသူ နှလုံးသားအစီရင်ခံစာ ညီမလေးအတွက် မိုး(မျိုးကြီး) မိုး၂(မျိုးကြီး) ( 8.4 ) ချစ်တယ်ဟုတ် ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်း ဖက်ထားမယ် LetMeKissU ချယ်ရီသက်သေ ဖိတ်စာ နွေအလွမ်း ယူလိုက် အဖေ့မေတ္တာ လက်ခံပေးပါ(မျိုးကြီး) HaHaLaGyiAh မမ အပျိုကြီး ညီမလေး SnowQueenလက်ခံပေးပါ(၂) HERO ( မေ ) မမြင်ကွယ်ရာ ဟိုအရင်လို ငါ့ကိုပြောပါ မျှော်လင့်ချက်မဲ့(မျိုးကြီး) ယုံကြည်ပေးပါ BellyDancer ယုံကြည်ပေးပါ(Remix) အဖြူရောင်လေးပါကွယ် ရင်ထည်းခိုနားလှည့်ပေါ့ကွယ် မုန်းခိုင်းတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘူး ပေါက်တဲ့အိုး တိတ်တခိုးအချစ် စံပါယ် တခုလောက်ဖြေပေးပါ ယုံကြည်ခြင်း၂dfအပြုံးလေး စိုးရိမ်ရတာပေါ့ မျှော်လင့်ခြင်းအဆုံး အပြစ်တခုဖန်ဆင်း ဘ၀ရဲ့လမ်းများ ခွဲခွါခြင်းနေ့ရက်များ ငါတော့မှားပြီ ကိစ္စမရှိဘူး မင်းနဲ့မဆုံသ၍ တို့နှစ်ယောက် ပျော်ပါစေ ဖက်ထားမယ် မ-မရှိတဲ့နေ့ရက်များ တွဲလက်များ ဒီကောင်မလေးအတွက် ရှင်သန်ခြင်းပြဇတ် ရွှေရောင်အရှုံး (အိမ်) နင်သိရဲ့လား နေညိုရင်၂ ငါ့ရဲ့အနား ခိုင်မြဲသောအချစ် ငါ့ရဲ့လမင်း ချစ်လို့ရရန် အလွမ်းပြေအနမ်း၂ မင်းလိုက်ရဲပါစေ သူငယ်ချင်းချစ်သူ အင်းယားလမ်းကပန်းဆိုင် သတိရရ-မရရ အဖြည့်ခံချစ်သူ တိတ်တခိုး နင်မလိုချင်လဲ လမ်းပျောက်ချိန် အလွမ်းကဗျာ အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ မညာပါနဲ့ ချစ်သူလေး ညလေပြေ အိနြေ္ဒရှင်မလေး မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် လေပြေ၂ တဖက်သတ်အလွမ်း ဝေးပြီးတဲ့နောက် မနဲ့မောင် ချစ်တယ် ပြုံးလိုက်ပါ နှလုံးသားချင်းထိတွေ့ခဲ့တယ် ဖူးစာရှင် ဗုဒ္ဓမေတ္တာပန်း အိမ်မက်ရဲ့သမီးပျို မင်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ အလွမ်းသင့်ပန်းချီ ပျော်သလိုနေလိုက်တော့ စိတ်ကူးလွင်ပြင် အလွမ်းနိဂုံး မျှော်လင့်ခြင်းအဆုံး ဘ၀ရဲ့လမ်းများ နင်သိရဲ့လား အလွမ်းပြေအနမ်း၃ လရောင်ဆမ်းသောလမ်း တစ်ဖက်သက်အလွမ်း ဝေးပြီးတဲ့နောက် တစ်နေ့တော့ လမင်းသစ်ပင် ချစ်သူ နားနားဘေးမှာ ပျံသန်းသွားတော့ ဟုတ်လို့လား Never Be Replaced ချစ်မိနေပြီ နိုးတစ်ဝက်အချစ် အချစ်အတွက်ကိုယ်စား ငါ့ရဲ့အနား ၂ ဝေးသွားတဲ့အခါ မီးအိမ်ရှင် ငါ့နေရာ Anywhere for you Justin Bieber(Baby) သီရိသူ ဒီဇင်ဘာည ဒီဇင်ဘာည၂ ငါမှားလားမင်းမှန်လား ဆေးကျောင်းသား တကယ်ဆိုရင် အမေ စွန့်လွှတ်ခက်သူ နင်စေရင် အနှိုင်းမဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အနိုင်မယူသူရဲ့အရှုံး ခိုးချစ်ရသူ နှလုံးသားအစီရင်ခံစာ ညီမလေးအတွက် မိုး(မျိုးကြီး) မိုး၂(မျိုးကြီး) ( 8.4 ) ချစ်တယ်ဟု
LetMeKissU ချယ်ရီသက်သေ ဖိတ်စာ နွေအလွမ်း ယူလိုက် အဖေ့မေတ္တာ လက်ခံပေးပါ(မျိုးကြီး) HaHaLaGyiAh မမ အပျိုကြီး ညီမလေး SnowQueen လက်ခံပေးပါ(၂) HERO ( မေ ) မမြင်ကွယ်ရာ ဟိုအရင်လို ငါ့ကိုပြောပါ မျှော်လင့်ချက်မဲ့(မျိုးကြီး) ယုံကြည်ပေးပါ BellyDancer ယုံကြည်ပေးပါ(Remix) အဖြူရောင်လေးပါကွယ် ရင်ထည်းခိုနားလှည့်ပေါ့ကွယ် မုန်းခိုင်းတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘူး ပေါက်တဲ့အိုး တိတ်တခိုးအချစ် စံပါယ် တခုလောက်ဖြေပေးပါ ယုံကြည်ခြင်း၂ မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် ကမ္ဘာပျက်နေ့ နင့်ကိုငါအချစ်ဆုံး ကင်ဆာ အချစ်နဲပိုက်ဆံ နင်တစ်ယောက်တည်း သံစဉ်နဲ့ချော့သိပ်ခွင့် (မမ) ချစ်တယ်မရေ အချစ်မှတပါးအခြားမရှိပြီ တနေ့တော့ချစ်လာလိမ့်မည် အမေ့ မင်းအကြောင်းအိမ်မက်တန်ဆောင်တိုင်သီချင်း အလွမ်းနဲ့ရူးပြီ နှမြောတယ် သူလေး ကောင်းကင်ကအချစ်ငှက် ဆာဒါငဲယိုး ခိုနားရာ အိမ်မက်ကမ္ဘာ အလွမ်းဝင်္ကဘာ ပထမအနမ်းသီချင်း စကားလုံးတွေမလိုဘုး (နိဒါန်း) လေလွှင့်သူ အာဇာနည် ငါဆက်ချစ်မယ့်သူ ရုပ်သေးရုပ် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ ဒီတစ်ခါမခွဲတော့ဘူး
3D Maker (2)
APK Maker (1)
Flash Maker (9)
Photo Maker (4)
Pohoto shop (17)
Downloadဆွဲရာမှာလျှင်လျှင်မြန်မြန်ဆွဲနိုင်မယ့် B Tube Browser
ဘလော့ဂ်ဒေးအမှတ်တရ အသစ်ရေးထားတဲ့ ၀ထ္ထုလေးပါ ။
you tube mp3/mp4 Download နှင်အခြားDownload အမျိုးမျိူး
Mp3 Download for androd
MP3 DOWNLOAD ( April Queen 1 )
MP3 သီချင်းကို ကိုယ့်ပုံလေးနဲ့လုပ်ချင်ရင်
Facebook For PC ကွန်ပျူတာတွက် Facebook ဆော့ဝဲ
Android ဖုန်းတွက် Facebook version 20​ကျော်​
Mount RAR ISO MDF file
Collection Of Codecs
Driver Backup! 2.1
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါနော်Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Zawgyi Myanmar font system
အာကာမိုးနိုင်. Powered by Blogger.